रतन्धो : कारण, लक्षण र उपचार – Health Post Nepal
इन्दुप्रसाद ढुंगेल, मेडिकल निर्देशक, नेपाल आँखा अस्पताल
२०७५ कार्तिक १० गते १९:०१
रातको समयमा आँखा नदेख्नुलाई रतन्धो भनिन्छ । अहिले रतन्धोरोग साझा समस्याका रूपमा देखिएको छ । यो वंशानुगत कारणले बढी लाग्ने गर्छ ।
वंशानुगत कारणले लाग्ने आँखारोगका ३ प्रकार हुन्छन्– १. अटोसमो डोमिनेन्ट
२. अटोसमो रिसेसिब
३. अटोसमो सेक्सलिन
रतन्धो भिटामिन एको कमीबाट पनि हुने गर्छ । भिटामिन एको कमीबाट हुने रतन्धोरोग भिटामिन एयुक्त खानेकुराहरूको सेवनपश्चात् हराउने गर्छ । तर, वंशानुगत कारणले हुने रतन्धो भने निको हुन सक्दैन । रतन्धो भएका बच्चा साँझको समयमा हिँडडुल गर्न मान्दैनन् ।
रातको समय बच्चा प्रायः यताउति जान नरुचाईकन घरमै बस्न खोजेमा आमाले बच्चालाई रतन्धो भएको थाहा पाउन सक्छिन् । तर, रतन्धोरोग लागेका बच्चालाई भने मैले आँखा देख्दिन भन्ने थाहा हुँदैन । १० वर्षभन्दा माथिका कतिपय बच्चालाई भने आफूलाई उक्त रोग लागेको महसुस हुने गर्छ ।
वंशानुगत कारणले लाग्ने सेक्सलिन नामक रतन्धो प्रायः १ वर्षदेखि नै सुरु हुने गर्छ । त्यसैगरी, ‘डोमिनेन्ट’ भने वयष्क हुँदै जाँदा लाग्ने गर्छ । सामान्यतया रतन्धोरोग वंशानुगत कारणले लाग्ने भए पनि त्यसबाहेक खाना तथा भिटामिन एको कमीका कारण पनि लाग्ने गर्छ । आँखाको दृष्टिपर्दामा लाग्ने अन्य रोगका कारण पनि रतन्धो हुने गर्छ ।
– वंशानुगत ।
– भिटामिन एको कमी ।
– आँखाको दृष्टिपर्दामा लाग्ने रोग ।
नेपाल सरकारले वेला–वेलामा पोलियाउे तथा भिटामिन एको कमीका कारण हुने रतन्धो नियन्त्रण तथा हटाउनका लागि भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण गरिरहेको हुन्छ । त्यसले भिटामिन एको कमीबाट हुने रतन्धोरोग निको पार्नमा सहयोग पु¥याउँछ । अस्पतालमा उपचारका क्रममा आउँदा भिटामिन एको कमीका कारण भएको रतन्धो निको हुन सक्छ ।
आँखाको दृष्टिपर्दामा आएको खराबीका कारण रतन्धो लागेको हो भने पनि रेटिनाको उपचार गरेपछि रोग निको हुन्छ । वंशानुगत कारणले रतन्धो भएको हो भने जति लामो समय भयो, त्यति नै आँखामा अन्य प्रकारका समस्या पनि देखापर्दै जान्छन् । जस्तै, आँखाको पर्दामा समस्या आउँछ, जसको उपचार हुन सक्दैन ।
उमेरअनुसार रतन्धोका लक्षण पनि फरक–फरक पाउन सकिन्छ । जस्तै, बच्चालाई रतन्धो लागेको छ भने–
– आँखाको सेतो भागमा साबुनको फिँजजस्तै देखिन्छ ।
– बच्चाले आँखा माडिरहन्छ ।
– साँझ परेपछि बच्चाको दौडधुप कम हुँदै जान्छ ।
वयष्कहरूमा पनि रातको समयमा हिँडडुल गर्न, मोटरसाइकल तथा गाडी चलाउन असहज महसुस हुन्छ ।
– कुपोषण अर्थात् भिटामिन एको कमीका कारण रतन्धोरोग लागेको हो भने भिटामिन एयुक्त खानेकुराहरू खाएमा उक्त रोग निको हुन्छ ।
– यदि, वंशानुगत कारणले रतन्धोरोग लागेको हो भने त्यसको उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
– रतन्धोको शल्यक्रिया अभ्यासका लागि भएको भए पनि आमबिरामीमा भने अहिलेसम्म कुनै शल्यक्रिया भएको छैन ।
Tags: इन्दुप्रसाद ढुंगेल, नेपाल आँखा अस्पताल, मेडिकल निर्देशक, रतन्धो
आइओएम डिनमाथि कार्यकक्षमै दुर्व्यवहारका अभियुक्त अझै प्रहरीको हात लागेनन्, फ्याकल्टी डाक्टरले थाले आन्दोलन
स्टार हस्पिटलले चाडबाड लक्षित वृहत स्वास्थ्य शिविर गर्ने
विभागका महानिर्देशक डा. पोखरेलले गरे पदबहाली